जानुकामा आएर कोहि पनि निरास भएर फर्किनु परेको छैनः सुरज केसी - Sindhuli Saugat
जानुकामा आएर कोहि पनि निरास भएर फर्किनु परेको छैनः सुरज केसी
सिन्धुली साैगात संवाददाता २०७४ फागुन ५ गते शनिवार काठमाडौं
सुरज केसी, संचालक जानुका एजुकेशन फाउन्डेसन
विदेशमा उच्च शिक्षा हासिल गरी स्वदेश आएर सेवा गर्ने धेरै विद्यार्थीको चाहना छ । प्लस टु गरी सकेका ब्याचलर, मास्टर्स गर्न विदेश गएर अन्तर्राष्ट्रिय डिग्री हासिल गर्ने पछिल्ला विद्यार्थीहरूको सोच हो । अहिले नेपालबाट वार्षिक २० हजार बढी विद्यार्थी पढ्नकै लागि विदेश गइरहेका छन् । अधिकांश विद्यार्थीहरूले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, न्यूजलेण्ड जस्ता देशहरू रोजेको पाइन्छ । यी देशहरूमा जानका लागि विद्यार्थीलाई सही दिशानिर्देश गर्ने काम शैक्षिक परामर्श व्यवसायी संस्थाहरूले गर्दै आइरहेका छन् । जानुका एजुकेसन फाउण्डेशनले अस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजील्याण्ड र युरोपका विश्वविद्यालय, सरकारी तथा निजी कलेजहरूको बारेमा परामर्श दिदैँ आएको छ । आफू जान चाहेको देशको शैक्षिक प्रणाली, नेपाली विद्यार्थीले पाउने छात्रवृत्ति, कलेज, विश्वविद्यालय छनौट देखि आवश्यक कागजात निर्माणमा सहजिकरणका साथै भिसा प्रक्रियाका बारेमा समेत विद्यार्थीले परामर्श लिन सक्ने एजुकेशन फाउण्डेशनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुरज केसीले बताए । उनीसँग यसै सन्दर्भमा सिन्धुली सौगातका कार्यकारी सम्पादक सौगात रायमाझलिे गर्नुभएको कुराकानीको संक्षेपः
जानुका एजुकेशन फाउन्डेसन कुन सोच बाट संचालन गर्नु भयो ?
जानुका सेभिंग एण्ड क्रेडिट बाट सुरु भएको यात्रा हो यो । यसलाई हामीले जनचाहना अनुसार नै खोलेका हौ । हामीले जानुका सहकारी चलाई रहदा पब्लिक बाट नै डिमाण्ड आए पछी हामीले सस्तो र सुलभ तरिकाले बैदेशिक शिक्षा आर्जन गर्न जाने विद्यार्थीहरुको लागि पुल बन्ने सोच लिएर खोलेका हौँ । हाम्रो सोचाइ भनेको अहिले बजारमा देखिएको गलत प्रबृत्तिलाइ अन्त्य गरेर गुणस्तरीय शिक्षा पाउने आम विद्यार्थीहरुको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नु हो ।
यसले अहिले विद्यार्थीहरुलाई कस्ता कस्ता सेवाहरु दीईरहेको छ ?
अहिले हामिले टेस्ट प्रिपेरेसनमा आइ.इ.एल.टि.एस क्लास र जापानीज भाषा बढी फोकस गरेका छौँ भने बैदेशिक अध्ययनमा जापान ,अस्ट्रेलिया तथा अन्य युरोपियन राष्ट्रहरु छन । बिशेष गरि हामि अहिले अस्ट्रेलिया र जापानको लागि काम गरिरहेका छौँ । युरोपियन कन्ट्रीहरुमा माल्टा, पोल्याण्ड, डेनमार्क लगायतका कन्ट्रीहरु गरेका छौँ ।
अस्ट्रेलिया र जापान नै रोज्नु को कारण ?
अहिलेको ट्रेण्ड हेर्ने हो भने लगभग ७० प्रतिशत बिद्यार्थीहरु अस्ट्रेलिया र जापान नै गइराखेका छन् । साथै अस्ट्रेलियाको एजुकेशन सिस्टम र बिद्यार्थीको राम्रो भविष्यको कारण हामीले अस्ट्रेलियालाइ पहिलो प्राथमिकतामा राख्यौ र जापान चै मध्यम वर्गीय तथा निम्न वर्गीय तथा मध्यम स्तरको पढाई भएका विद्यार्थीहरुलाई प्राथमिकतमा राखेर फोकस गरेका हौँ ।
एउटा कन्सल्टेन्सीले अभिभावक र बिध्यार्थीको मन जित्न के गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ?
वास्तवमा भन्नु पर्दा एकदम टफ छ कन्सल्टेन्सी मार्केट । तपाइले देख्नु नै भएको छ च्याउ सरि उम्रियाका कन्सल्टेन्सीहरु । अस्वस्थ प्रतिश्पर्धा छ । कन्सल्टेन्सीहरुले सुरुमै विभिन्न वहानामा पैसा माग्ने, झुटा आश्वासन तथा भ्रामक सुचनाहरु सम्प्रेषण लगायतका कामहरु गरेको देख्न पाइन्छ । यि यावत गलत प्रवृतीहरुवाट विद्याथीहरुलाई मुक्त दिनको लागी हामी यस क्षेत्रमा हात हालेका हौ । अर्को मुख्य कुरा हामि ठिक टाइममा छिटो रेस्पोन्स गर्छौ । हाम्रो व्यवस्थापन सवल छ । हामि सँग प्रोफेसनल काउन्सिलर हुनु हुन्छ । हामि बिद्यार्थी हुदा जुन समस्या हामीले भोग्यौ त्यस्तो समस्या हामि कहा आउने बिद्याथिहरुले भोग्नु हुदैन भन्ने मान्यतामा जोड दिन्छौ । हामि कहा आइसकेपछी जो कोहि बिद्यार्थीहरुले आखा चिम्म गरेर हामीलाई बिश्वास गर्ने वातावरण हामी सिर्जना गर्छौं । हामि विद्यार्थीलाइ सस्तो ,भरपर्दो र सहि गाइड लाइन दिने गर्छौ । सायद यस्तै पारदर्सी र ब्यापार मात्र नठानी सहि भएर आफ्नो कर्म निभायो भने विद्यार्थी तथा अभिभावक बर्गको मन आफै जितिन्छ जस्तो लाग्छ ।
बिद्यार्थीले कसरि सहि कन्सल्टेन्सी छान्ने ?
यो कुरामा चै नमरी स्वर्ग देखिन्न भनेझै विद्यार्थीले आफै गएर सेवा नलिेदा सम्म राम्रो नराम्रो भनेर थाहा पाउदैनन तर पनि कन्सलटेन्सी छान्दा त्यसको इतिहास,व्यवस्थापन टिम, पढाउने वातावरण आदि कुराहरु ख्याल गर्नुपर्छ । साथसाथै शिक्षा मन्त्रालयवाट मान्यता प्राप्त छ कि छैन, अन्य विभिन्न सम्वन्धित निकायसँग आबद्ध छ कि छैन भन्ने कुरा समेत ख्याल गनुपर्छ ।
विदेश पढ्न जान चाहने बिद्यार्थी र तिनका अभिभावकले के कस्ता कुरामा ध्यान पुर्याउनु पर्छ ?
सर्वप्रथम वैदेशिक अध्ययनको लागि जान कम्तीमा प्लस २ पास गर्नुपर्ने हुन्छ । अब अस्ट्रेलिया जान इच्छुक हुनुहुन्छ भने सबै भन्दा पहिला ६० प्रतिसत भन्दा माथिको एकेडेमिक रिजल्ट हुनु पर्यो । आएल्समा ६ ल्याउनु पर्यो र आर्थिक स्थिति सबल हुनु पर्यो । कलेजको फि अलि सस्तो हुन्छ युनिभर्सिटिको भन्दा । अस्ट्रेलियाको लागि कम्तिमा १५ देखि २० लाख खर्च गर्न सक्ने हुनु पर्छ । अनि जापानको केसमा मध्यम तथा निम्न बर्गीय विध्यार्थीलाई जोड दिएका छौ । ६०५ भन्दा कम लिएर आएका विध्यार्थीहरु पनि जापान अध्ययनको लागि जान सक्छन । जापानिज भाषामा दक्ष हुनुपर्छ । । जापान जान चाहानेले कम्तिमा ९ देखि १० लाख लगानी गर्नु पर्छ । जापान गईसकेपछि १८ देखि २४ महिना भाषा पढ्नु पर्छ ।
विदेश पढ्न जान चाहने बिध्याथिहरुले तपाइकै कन्सल्टेन्सी किन रोज्ने ?
एक दम राम्रो प्रश्न गर्नु भयो । जानुका एजुकेशन त्यतिकै यहाँ आइपुगेको होइन । हामि सँग सवल टिम छ । हामि बिद्यार्थीको सजिलोको लागि वलियो तथा पक्की पुल बन्न आएका हौँ र बनिरहेका पनि छौँ । हामि जापानको लागि भाषा र आयल्स अन्य कन्सल्टेन्सीहरु भन्दा सस्तोमा गराई राखेका छौँ । त्यस्तै आएल्स गर्ने विद्यार्थीहरुलाई लाइ फ्री मक टेस्ट सुबिधा हामीले दिएका छौँ । विद्यार्थीले चाहेको खण्डमा अतिरिक्त क्लास लिनु परेमा पनि जानुका एजुकेशन फ्रीमा उनीहरुले चाहे सम्म कक्षा संचालन गर्छ । यदि तिनीहरुलाई अंग्रेजी क्लास लिनु पर्यो भने हामि फ्री मा नै क्लास दिन्छौ । जानुकामा अहिले सम्म आएका कोहि पनि निरास भएर फर्किनु परेको छैन । हामि तपाइहरुलाई सहि र सरल बाटोबाट तपाइको गन्तव्यमा पुर्याउने बाचा गर्दर्छौ । हामि यो मार्केटमा जानुकालाई एउटा विश्वासिलो ब्राण्ड बनाउन चाहान्छौ । हामि नाफा र आफ्नो ब्यापारलाइ मात्र नहेरि विद्यार्थीको इच्छा तथा सामर्थ्यलाइ ध्यानमा राखेर उपयुक्त सल्लाह तथा सुझाव दिनुका साथै गुणस्तरिय सेवामा जोड दिन्छौ ।
अन्त्यमा, विदेशमा पढ्न जान लागेकाहरुलाई केहि भन्नुहुन्छ ?
सर्वप्रथम त, विदेश पढ्न जान लागेकाहरुलाई पहिलो समस्यानै कुन कन्सल्टेन्सी रोज्ने भन्ने हो । त्यसैले म के भन्न चाहान्छु भने राम्रो तरिकाले बुझेर मात्र कन्सल्टेन्सी रोज्नुपर्छ र राम्रो कन्सल्टेन्सी छान्न सकेमात्र विदेश पढ्न जाने यात्रा सुखद रहनेछ । अन्यथा, विदेशमा पढ्न गाह्रो छ । धन्यवाद !
पछिल्लाे - हरेक पाँचमध्ये एक जनामा मानसिक समस्या
अघिल्लाे - ओलीले देखाए परनिर्भरता हटाउने संकेत, पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्न विज्ञ नेपाल आउदैँ